ဘယ်လိုသတင်းထောက်များဂရိတ် Follow-up, သတင်းပုံပြင်ရေးထားနိုင်သလား
တစ်ဦးလတ်ဆတ် Lede ရှာဖွေခြင်း Key ကို Is
တစ်ခုတည်းရေးသားခြင်း အခြေခံဖဲ့သတင်းဆောင်းပါး တစ်ဦးတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ရေးသားခြင်းအားဖြင့်စတင်ပါ lede ဇာတ်လမ်းအတွက်အရေးအပါဆုံးအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးသော။
သို့သော်များစွာသောသတင်းပုံပြင်များရိုးရှင်းစွာတဦးတည်းအချိန်ဖြစ်ရပ်များမဟုတ်ဘဲရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ပင်လကြာကြာရှည်နိုင်သည်ကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအကြောင်းအရာများမရှိကြပေ။ ဥပမာတစျခုတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ် ရာဇဝတ်မှုဇာတ်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကရှာဖွေခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သံသယရှိသူဖမ်းဆီးဖြစ်လျှင်, ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေသည် - အချိန်နှင့်အမျှတခုခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဖြစ်သည်။
သတင်းထောက်များမကြာခဏဤကဲ့သို့သောရှည်တည်မြဲသည့်အကြောင်းအရာများများအတွက်နောက်ဆက်တွဲဆောင်းပါးများဟုခေါ်ကြသည်ဘာလုပ်ရပါမည်။ ဤ link ကို သငျသညျနောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းများဘို့စိတ်ကူးများဖွံ့ဖြိုးဆဲအကြောင်းကိုဖတ်နိုင်သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့နောက်ဆက်တွဲ-ups ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လိုဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။
ထိရောက်သောနောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းကိုရေးသားဖို့အဓိကသော့ချက် ကတော့ lede နှင့်အတူစတင်သည် ။ သင်အချိန်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလအတွင်းဆက်လက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်များအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတူညီတဲ့ lede ရေးလိုက်လို့မရပါဘူး။
အဲဒီအစား, သငျသညျ, နေ့တိုင်းဇာတ်လမ်းထဲမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုထင်ဟပ်ကြောင်းတစ်ခုလတ်ဆတ် lede တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
သူတို့အားနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပါဝငျသော lede ရေးသားခြင်းစဉ်သို့သော်သင်တို့သည်လည်းမူရင်းဇာတ်လမ်းနဲ့စတင်အားလုံးကိုအကြောင်းကိုဘာကသင်၏စာဖတ်သူများသတိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်း lede တကယ်မူရင်းဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့နောက်ခံပစ္စည်းနှင့်အတူသစ်ကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပေါင်းစပ်။
ရဲ့သင်တစ်ဦးကိုဖုံးလွှမ်းပြောပါစို့ အိမျတျောကိုမီး အများအပြားကလူဦးသေဆုံးပြီးထားတဲ့အတွက်။
ဤတွင်ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းအဘို့သင့် lede ဖတ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖွင့်:
အခုတော့ရဲ့ရက်ပေါင်းများစွာကူးမြောက်ခြင်းနှင့်မီး Marshal မီးမီးရှို့မှုတစ်ခုကိစ္စတွင်ခဲ့သငျသညျကိုပြောတယ်ဆိုပါစို့။ ဤတွင်သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနောက်ဆက်တွဲ lede င်:
ယခုအပတ်အစောပိုင်းကလူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးသောအိမ်သူအိမ်သားမီးတမင်တကာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်, မီး Marshal မနေ့ကကြေညာပါတယ်။
မီးအတွက်ဦးသေဆုံးပြီးလူနှစ်ဦး - - သစ်ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးအတူ - ကမီးရှို့မှုခဲ့ကြောင်းကြေညာမီး Marshal အဆိုပါ lede မူရင်းပုံပြင်ကနေအရေးကြီးသောနောက်ခံပေါင်းစပ်ပုံကိုကြည့်ရှုပါ။
အခုတော့ရဲ့တဦးတည်းခြေလှမ်းနောက်ထပ်ဒီဇာတ်လမ်းကိုယူကြကုန်အံ့။ ရဲ့တစ်ပါတ်လွန်ပြီနှင့်ရဲသူတို့ကမီးရှို့လို့ပြောသူတစ်ဦးသည်လူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြလို့ပြောကြပါစို့။ ဤတွင်သင့်ရဲ့ lede ငှါဘယ်လိုဖွင့်:
စိတ်ကူးရယူမလား? တဖန် lede နောက်ဆုံးပေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနှင့်အတူမူရင်းပုံပြင်ကနေအရေးကြီးဆုံးသတင်းအချက်အလက်များပေါင်းစပ်။
အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်း၏ကျန်နောက်ခံအချက်အလက်တွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းပေါင်းစပ်ပြီး၏တူညီသော balancing လုပ်ရပ်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ အဟောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုဆင်းနိမ့်ဖြစ်သင့်အနေဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အသစ်များကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု, ဇာတ်လမ်းအတွက်ပိုမိုမြင့်မားထားရှိရပါမည်။
ဤတွင်မီးရှို့မှုသံသယရှိသူများ၏ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်အပိုဒ်ကိုသွားစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုဖွင့်:
ရဲတပ်ဖွဲ့ Larson Jenkins, 23, သူ့ရည်းစား, Lorena Halbert အသတ်ခံရသောအိမ်သူအိမ်သားမှာမီးရှို့ဖို့ဓာတ်ဆီနှင့်အတူစိမ်ရာတွင်အသုံးပြုစုတ်, 22, သူ့မိခင်မာရိ Halbert, 57 ကဆိုသည်။
စုံထောက်ဂျယ်ရီ Groenig Halbert မကြာသေးမီကသူ့ကိုအတူတက်ကျိုးပဲ့သောကြောင့်လွန်ခဲ့သောလ Jenkins ပုံအမျက်ထွက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါမီးသည်လွန်ခဲ့သောအင်္ဂါနေ့န်းကျင်3နာရီတွင်စတင်လျင်မြန်စွာအိမျတျောကိုတစျဆငျ့မျော။ Lorena နဲ့ Mary Halbert အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာသေလွန်သောသူတို့သည်အသံထွက်ခဲ့သည်။ အခြားမည်သူမျှထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
တနည်းကား, နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဇာတ်လမ်းအတွက်အမြင့်ဆုံးချထားပါသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမြဲမူရင်းအဖြစ်အပျက်ကနေနောက်ခံမှချည်ထားသောနေကြသည်။ ဤနည်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဤပုံပြင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပင်စာဖတ်သူကိုလွယ်ကူစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။
ဤတွင်သတင်းထောက်များသူတို့ရဲ့သတင်းပုံပြင်များသည်ကောင်းမွန်သော Quotes Get နိုင်သလားဘယ်လိုဖွင့်
အသံလွှင့်သတင်း Copy ကူးရေးထားလုပ်နည်း
တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များအကြောင်းရေးဘို့6သိကောင်းစရာများ
ဂျာနယ်လစ်များအတွက် Feature ကိုပုံပြင်အမျိုးအစားများ
တစ်ဦး Reader ကိုရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုယူလိုက်ပါလိမ့်မည်ဒါကစာပေပြုစုရေးသတင်းပုံပြင်ခြောက်သိကောင်းစရာများ
2018 ခုနှစ်တွင်ကလေးများများအတွက်ထိပ်တန်း 18 ရုပ်ပြစာအုပ်များ
အဆိုပါ Vestalia ကဘာလဲခဲ့သလား
Adidas ၏ Origins ၏တစ်ဦးကလျင်မြန်စွာသမိုင်း
ထိပ်တန်း 11 ဖက်ဒရယ်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်များ
'' Auld Lang Syne '' Play မှလေ့လာပါ
တစ်ကျိန် ဆို. ပူဇော်နှင့်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီး Is ဆိုတာဘာလဲ
ရူပဗေဒနှင့်ဓာတုဗေဒအတွက် quantum အဓိပ္ပာယ်
အဆိုပါ Simpsons '' လိပ်စာကဘာလဲ?
သင်မည်သို့ဂျပန်ထဲမှာ "ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ္စမတ်" ဟုပြောပါသလား?
Pinyin နှင့် Phonetic Input Method ကိုအသုံးပြုခြင်းတရုတ်ဇာတ်ကောင်ရေးရန်
အဆိုပါ 20 ရယ်စရာအကောင်းဆုံးတိရိစ္ဆာန်လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု
အီတလီအတွက်ကြိယာ "Lavorare" Conjugate လုပ်နည်း
Millipedes အကြောင်း 10 စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်
ထိပ်တန်း 10 ကောလိပ်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ
ကလေးများနှင့်အတူ Yule အခမ်းအနားကျင်းပဖို့ဂရိတ်နည်းလမ်းများ
တစ်ဦးကို Global Language အဖြစ်အင်္ဂလိပ်
ပဲ (Pisum sativum အယ်လ်) ပြည်တွင်း - Peas နှင့်လူသားတွေဟာများ၏သမိုင်း